कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि हरसम्भव प्रयास गरिरहेका छौं « Anumodan National Daily
कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि हरसम्भव प्रयास गरिरहेका छौं
By : - प्रस्तुति शेरबहादुर ऐर/कैलाली
अहिले धनगढीस्थित सेती प्रादेशिक अस्पतालमा कोरोना भाइरस संक्रमित चार जनाको उपचार भइरहेको छ । ती मध्ये दुई जना धनगढी उपमहानगरपालिकाभित्र कै बासिन्दा रहेका छन् । धनगढीमा सुदूरपश्चिमकै प्रमुख सिमा नाका समेत रहेको छ । त्यस्तै, खुला सिमानाका कारण सिमावर्ती भारतीय गाउँशहरबाट अवैध रुपमा नेपाली तथा भारतीय नागरिक नेपाल प्रवेशको सम्भावना रहिरहेको छ । अर्कोतिर लगातारको लकडाउनका कारण दैनिक मजदूरी गर्ने तथा विपन्न वर्गका परिवारको जीवन कष्टकर हुँदै गएको छ । यी वस्तुस्थितिबीच धनगढी उपमहानगरपालिकाले कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका साथै विपन्न वर्गको राहतका लागि के कस्ता काम गरिरहेको छ ? प्रस्तुत छ, धनगढी उपमहानगरपालिका प्रमुख नृपबहादुर वडसंगको कुराकानीको सम्पादित अंश । प्रस्तुतिः शेरबहादुर ऐर
दुई जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएपछि उपमहानगरपालिकाले के गर्दै छ ?
धनगढी उपमहानगरपालिकाभित्रै दुई जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण भइसकेको छ । त्यसैले हामीले पनि रोकथाम र नियन्त्रणका लागि विशेष सावधानी तथा तयारी गरिरहेका छौं । चैत्र ७ गते दुवईबाट नेपाल आएका धनगढीका ३४ वर्षीय युवकमा कोरोना भाइरस संक्रमण रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले चैत १४ गते कोरोना भएको पुष्टी गरेका थियो । भने चैत २२ गते उनकी भाउजुमा पनि कोरोना संक्रमण देखिएको छ । यससंगै नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमण दोस्रो चरणमा प्रवेश भइसकेको छ । दोस्रो चरण भनेको लोकल ट्रान्समिसन अर्थात स्थानीय संक्रमणको अवस्थामा आइपुगेका छौं । त्यसैले हामीले अझ व्यापक रुपमा कोरोनाबारे जागरुकता ल्याउन नगरका सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालन गरेका छौं । सबै जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी, स्वयंसेविका, विभिन्न क्लव, सामाजिक संघ÷संस्था, सुरक्षाकर्मी लगायत सबै परिचालन गरिएको छ । सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी बल तैनाथ छ । नगरका सबै क्षेत्रमा नेपाल प्रहरी परिचालित छ ।
कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथामको सबैभन्दा मुख्य उपाय भनेको सामाजिक दूरी नै हो । उपमहानगरपालिका यसका लागि निरन्तर आम नगरबासीलाई जागरुक बनाउने प्रयास गरिरहेको छ । नेपाल सरकारले जारी गरेको लकडाउन पूर्ण रुपमा पालना गर्न, गराउन उपमहानगरपालिका कठोर बनेको छ । लकडाउन प्रभावकारी बनाउन हामी हदैसम्म कठोर बनेका छौं । संघीय सरकारले ११ गतेदेखि लकडाउन जारी गरेकोमा हामीकहाँ शुरुका केही दिन लकडाउन पूर्ण रुपमा पालना भएन । अहिले लकडाउनको राम्रैसंग पालना भइरहेको छ । उपमहानगरपालिकाले चैत २१ गते २२ गतेदेखि बिहान ६ बजेदेखि ९ बजेसम्म अतिआवश्यक सामग्रीका पसलहरु खोल्न निर्णय गरेको थियो । तर २२ गते उपमहागनपालिकाभित्रै थप एक जनामा कोरोना संक्रमण भेटिएपछि २३ गतेदेखि सम्पूर्ण पसलहरु पूर्ण रुपमा बन्द गरिएको छ । अहिले अतिआवश्यक कामबाहेक सडकमा मानिसको हिडडुल बन्द भएको छ ।
नगरमा महिला लक्षित क्वारेन्टाइनका बारेमा ?
धनगढी उपमहानगरपालिकाले महिलाहरुका लागि छुट्टै क्वारेन्टाइन कक्ष पनि व्यवस्था गरेको छ । धनगढीस्थित बी पोलिटेक्नीक ईन्स्टिच्यूटमा २२ सैयाको महिला क्वारेन्टाइन वार्ड स्थापना गरिएको छ । यो क्वारेन्टाइन विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्ड अनुसार तयार गरिएको छ । यसमा सेनिटरी प्याड लगायतको व्यवस्था गरेका छौं । त्यस्तै, कैलाली उद्योग वाणिज्य संघको परिसर, त्रिनगर माध्यामिक विद्यालय लगायतका चार स्थानमा गरि दुई सय ५१ बेडको क्वारेन्टाइन बनाएका छौं । आवश्यकता अनुसार थप्नका लागि अन्य स्थानमा तयारी गरेका छौं ।
भारतबाट धेरै भित्रिए, तर क्वारेन्टाइनमा थोरै मात्र रहेको बारे ?
उपमहानगरपालिकाको तथ्यांक अनुसार भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट हामीकहाँ छ सय ४१ जना भित्रिएका छन् । यसमा अझै केही व्यक्ति छुटेका हुनसक्छन् । कतिपय परिवारले यथार्थ जानकारी पनि दिनु भएको छैन । हामीले त्यस्ता व्यक्तिहरुको खोजी गरिरहेका छौं । अहिले क्वारेन्टाइनमा ५४ जना हुनुहुन्छ । पहिले क्वारेन्टाइन बस्नु भएको एक सय जना घर फर्किसक्नु भएको छ । त्यस्तै, भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आएका सबै जना क्वारेन्टाइनमा नबसेको भए पनि प्रत्येक वडामा निगरानीमा राखिएको छ । भने घरभित्र पनि सामाजिक दूरी कायम गर्न बारम्बार आग्रह गरेका छौं ।
सीमामा सशस्त्र प्रहरी क्याम्प विस्तारबारे ?
कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि नेपाल तथा भारत सरकारले लकडाउन जारी गर्दै सिमानाका बन्द गरे पनि खुला सिमाको फाइदा उठाउँदै अवैध रुपमा नेपाली तथा भारतीय नागरिक नेपालमा प्रवेश गरिरहेको देखिएपछि संघीय सरकारले सिमामा सशस्त्र प्रहरी क्याम्प विस्तार गरेको छ । उपमहानगरपालिकाका थप तीन स्थान वडा नम्बर ९ बंगराकटान, वडा नम्बर १० को जुगेडा तथा वडा नम्बर २ मा सशस्त्र प्रहरीको चेक प्वाइन्ट राखिएको छ ।
लकडाउनका कारण अफ्ठेरामा परेका विपन्न वर्गलाई के कस्ता राहत प्रदान गरिँदैछ ?
निश्चय पनि लकडाउनका कारण दैनिक ज्यालादारी तथा अतिविपन्न वर्गलाई निकै कष्ट भइरहेको छ । धनगढी उपमहानगरपालिकाले त्यस्ता वर्गका लागि खाद्यान्न वितरण गरिरहेकोे छ । हालसम्म दुई हजार नौ सय २८ परिवारलाई २९ हजार दुई सय २५ किलो चामल, चार हजार नौ सय चार किलो दाल, दुई हजार नौ सय तीन लिटर तेल र नुन वितरण गरेका छौं । विभिन्न संघसंस्था तथा दाताले खाद्यान्न सहयोग गरिरहेका छन् । अहिलेसम्म १५ हजार दुई सय २५ किलो चामल, एक हजार पाँच सय ६१ किलो दाल, एक सय १६ पेटी तेल, ५७ कठ्ठा नुन र ७५ किलो आटा संकलन भएको छ । उपमहानगरपालिले स्थापना गरेको ५० लाख रुपैयाँको विपद व्यवस्थापन तथा राहत कोषबाट राहत वितरण गरिरहेको छ ।
अतिआवश्यक वस्तुको आपूर्तिका लागि निजी क्षेत्रबाट घुम्ती सेवा
उपमहानगरपालिकामा गत २३ गतेदेखि निजी क्षेत्रले अतिआवश्यक वस्तुको आपूर्तिका लागि घुम्ती सेवा शुरु गरेको छ । धनगढी उपमहानगरपालिकामा एक लाख ६० हजार जनसंख्या रहेको छ । निजी क्षेत्रले कोहीकसैलाई पनि खाद्यान्न लगायतका अतिआवश्यक वस्तु अभाव भएमा फोनमार्फत अर्डर गरेर मगाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
कोरोनाकै लागि एउटा एम्बुलेन्स
हामीसंग चार वटा एम्बुलेन्स रहेका छन् । हामीले कोरोना भाइरस संक्रमित फेला परेमा वा आशंका भएमा अस्पतालसम्म ल्याउन एउटा एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा राखेका छौं ।
कालोबजारी नियन्त्रणका लागि के गरिएको छ ?
सरकारले लकडाउन जारी गरेसंगै बजारमा कालोबजारी तथा मूल्यवृद्धि बढ्ने जोखिम रहेकोले हामीले बजार अनुगमनलाई कडा बनाएका छौं । गलत काम गर्ने अहिलेसम्म पाँच पसललाई जरिवाना सहितको कारबाही गरिएको छ । यस्तै, वडातहदेखि नगरस्तरीय अनुगमन समिति निर्माण गरिएको छ ।